FAQs - Fuzhou Henghua New Material Co., Ltd.
Amaxabiso ethu aphantsi kokutshintsha ngokuxhomekeke kubonelelo kunye nezinye izinto zentengiso. Ngokobunene sinike iinkcukacha kangangoko kunokwenzeka, kubandakanya iGram, ububanzi, umbala, ubude be roll / ubuninzi bebonke, ukusetyenziswa kwaye ukuba kukho imfuneko ekhethekileyo kwiimpawu umzekelo ukumelana ne-UV , ukungenwa kwamanzi njl.
Siyathembisa ukukunikela ngexabiso lefektri enomgangatho ophezulu.
Ewe sifuna zonke iiodolo zamanye amazwe ukuba zibe nobungakanani be-odolo ubuncinci obuqhubekayo, ikakhulu itoni yombala omnye. Ukuba ujonga ukuthengisa kodwa ngamanani amancinci kakhulu, sicebisa ukuba ujonge iwebhusayithi yethu.
Iisampulu, ixesha phambili malunga neentsuku ezingama-2-3. Kuba imveliso mass, ixesha phambili iintsuku 7-15 emva kokufumana intlawulo yedipozithi.
Ungayenza intlawulo kwiakhawunti yethu yebhanki, DP, LC, Alibaba.
Ndingalufumana njani isampulu lokujonga umgangatho wakho?
Singacwangcisa iisampulu kuwe ukujonga umgangatho weemveliso zethu. Isampulu isimahla, kodwa kuya kufuneka uhlawule umrhumo wokubonisa
Ixabiso leRoll Roll, Polypropylene Spunbond Non womluki Ilaphu, Izinto ezingalukanga, Non womluki Ilaphu, Indwangu yePolypropylene engeyiyo ephothiweyo, Kk Non womluki Ilaphu,